Ochwepheshe abaningi emkhakheni wezokusebenza kwengqondo wezifo zengqondo wasebenzisa ulwazi ukuthi wayengomunye walaba neurophysiologists edume kunazo American. Watadisha amahlengethwa ukwazi, ephethwe ekucebiseni Psychology izindlela wamavukelambuso ucwaningo lwesayensi. Futhi ngesikhathi kwenziwa ucwaningo lwakhe, usosayensi wathola idatha ezithakazelisayo kakhulu zesayensi. Ubani lo muntu ongaqondakali?
D. Lilly - ebuntwaneni
Lena Dzhon Lilli - kudokotela, umnumzane biophysicist, womqalisi kanye kwezinzwa. okukhethekile yakhe eyinhloko wakhetha ekutadisheni uthi ukwazi. Lilly wazalwa 6 Januwari 1915 e Saint Paul, Minnesota. Kwaphela isikhathi eside wayengumuntu omele eliqavile counterculture futhi kwakungekaNkulunkulu isikole efanayo Ram Dass futhi Timoti Liri. Lapho lo mfana iminyaka engu-10 abazali asendulo kwasihlaba amaKatolika zenkolo, kwayilungiselela isevisi ye-aldari. John esengumfana bexhwalile, egxilile emhlabeni imicabango yakhe siqu fantasies.
Okokuqala, ethanda impumelelo wabazali emkhakheni nzima yompristi esizayo: ingane babethandaza, behlabelela ekwayeni ezingokomoya, waya enkonzweni. Nokho, maduzane nje, uLilly waqaphela ukuthi ibandla - lena akuyona indawo lapho ungathanda ukubona wena. Phela, nemfundiso yenkolo njalo sebehlushwa inkululeko yomuntu. John njalo izame ukuvikela ilungelo umbono wabo siqu, futhi ukuphila isonto ngaye ayikwazanga kuhlangene isimo sengqondo esifanayo. Abazali ngesicelo umfana wayiswa ke esikoleni isonto zezemfundo.
Youth nentshisakalo isayensi
Eminyakeni 13, uLilly waqala ukuba nesithakazelo emkhakheni wesayensi ahlukahlukene. Wayelethwa ikakhulukazi bakhangwa emkhakheni wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali. Kusukela kulonyaka, uJohane uqala ukuhlola yamakhemikhali ahlukahlukene. Ngemva kokutadisha at the Academy of St Paul, wathola iziqu esikoleni sobudokotela ngo-Dartmouth, bese - California Institute of Technology kanye ne-University of Pennsylvania.
Ngo-1942 wathola degree of Doctor of Medicine. Kuze 1956 Dzhon Lilli ubefundisa kuyo le nyuvesi. Kanye yokufundisa, ukutadisha theory psychoanalytic futhi Biophysics.
tank Ukuba Wedwa
Ngo-1954, uLilly ihlolwe ukwahlukanisa ithangi lokuqala, lapho kungenzeka ukuba afeze ucwaningo ezahlukene nokuswela sezinzwa. Ukusungulwa kwalesi ithangi kwaba umphumela inzalo yayo anda ekutadisheni komuntu.
Futhi ucwaningo lokuqala yayiqhutshelwa ku wamazwe abanesibindi yena. Ekugcineni, amathangi i nokuswela sezinzwa futhi waletha udumo kuJohane Lilly. Manje wonke umuntu ungavakashela inqubo nokuswela sezinzwa, esingalapheki libizwa floatation. Nokho, akubona bonke abaqaphelayo ukuthi ubani futhi lapho kwaba umsunguli wokuqala sezinzwa nokuswela ekamelweni.
Lolu cwaningo ukwazi izinhlelo
Kuze 1968 Lilly isebenza njengoba umqondisi we-Institute of Communications, ogama umsunguli walo wayenguNkulunkulu ngokwakhe. Phakathi nalesi sikhathi yafunda izici ukwazi ihlengethwa. Ngaleso sikhathi, uLilly balithanda ukusetshenziswa kwezidakamizwa - LSD futhi ketamine. Imiphumela yalesi ucwaningo eziye zanyatheliswa komagazini enye yezincwadi Dzhona Lilli - "Programming futhi metaprogramming le biocomputer womuntu".
Kulesi umsebenzi, uLilly ubiza ngayinye omdala oyi-zahlelwa bio-computer. Njalo izinhlelo omdala ngokwabo futhi uyakwazi ehlelweni omunye. Nokho, naphezu ukwehluka kwazo zonke izinhlobo izinhlelo, ukukhetha e wezandla zomuntu njalo kungagcini. Lilly ukholelwa ukuthi amanye uhlelo umuntu wazuza njengefa kusukela ezazingaphambi kwayo - iphuma kolwandle owumphumela, izipanji, ama-coral, izimpethu. Uhlelo esibalulekile wadluliselwa isimiso sezakhi zofuzo.
Njengoba isimiso sezinzwa, futhi ubukhulu bawo kuyinto ephilayo owandiswayo, uhlelo iba yinkimbinkimbi. It is abuseyona nezindaba sokusinda nokuzalwa kwabantu. Lilly ngokuthi cortex cerebral yomuntu "ikhompyutha entsha", eyaqala ukuvelela ngokuhamba ukuziphendukela kwemvelo ukuze ukulawula zindawo eziphansi ubuchopho, futhi ukuphatha kwabo.
Lapho iminyaka eziyizigidi ezimbalwa ezedlule, usayizi cortex cerebral ifinyelele usayizi ezibucayi, kwakukhona ikhono self-yokufunda. Ukuvela eyala ehlukahlukene - izibalo, i-physics, ifilosofi, ubuciko, njll - .. Ingabe kungenzeka kuphela khona cortex cerebral ukuthi ifinyelele usayizi oyifunayo.
Ucwaningo lwakhe ku nokuswela sezinzwa, yena kuhlangene izidakamizwa. Wayeshadile kathathu, unkosikazi wakhe wokugcina, Antonetta Oshman, washona ngo-1996. Dzhon Lilli yena wachitha iminyaka yakhe yokugcina e-Hawaii. Washona ngo 2001 e-Los Angeles. Empilweni yakhe yonke Lilly wabhala 125 amaphepha olungokwesayensi emikhakheni ehlukene. Ucwaningo amahlengethwa kwaholela yokuthi ngo-1972 e-United States waphasisa umthetho mayelana nokuvikelwa lokhu zezilwane ezincelisayo.
Ukutadisha ikhono lokukhulumisana amahlengethwa kubonakala emibhalweni Dzhona Lilli. "Dolphin ukucabanga", "Indoda ihlengethwa" - ukuthi umsebenzi wakhe kule ndawo. Nokho, abanye abacwaningi baye ayiqinisekiswanga imiphumela ucwaningo lwakhe egunjini lokucwaninga esibhedlela. Ngokwesibonelo, ososayensi baye amelana khona izinsolo zokuthi amahlengethwa obuyosifundisa zamagama amazwi ngolimi lwesiNgisi.
Ngesinye isikhathi, lapho omunye amahlengethwa yehliselwa echibini, isilwane washayeka ekhanda ngaquleka. Ihlengethwa zaqala ukucwila kuze kufike phansi. Ngalesi sikhathi ozakwabo zakhe yangibeka isilwane elimele ebusweni amanzi kanye aphethwe nje ihlengethwa ayikwazanga ukuphefumula evamile futhi. Ngemva kwalesi sehlakalo, Dzhon Lilli baphetha ngokuthi amahlengethwa yizilwane kwezenhlalo, ukulungele basizane esimweni esiphuthumayo.
Okunye usebenza Lilly
Enye yezincwadi abadumile Dzhona Lilli - ". Centre of kulesi siphepho" Lo msebenzi umphumela Ukufuna injongo yokuphila, okuyiwona umbhali kwathatha iminyaka engaba ngu-50. Ukutadisha ubuchopho bomuntu, umsebenzi ukwazi ezimweni yokungeneliseki sezinzwa futhi psychoanalysis, uLilly wayezama ukuthola ngentambo lakhe leqiniso. Futhi kule Lilly uchaza imiphumela ucwaningo lwakhe, ukusetshenziswa kwezidakamizwa - LSD futhi ketamine.
Yiziphi ezinye izincwadi Dzhona Lilli ongaba nentshisekelo abalandeli lakhe lokusungula nokuvivinywa okunzima ngokwedlulele? Lona umsebenzi "kabili isishingishane", "Cyclone Centre. Grain esigayweni. " Abaningi babo baye asihumushwanga isiRashiya, kodwa kungenzeka nesithakazelo kulabo abasebunzimeni kahle isiNgisi - Sekusetshenziswa kaNkulunkulu, The self ezijulile, I Usosayensi: A Novel Autobiography.
Hypothesis - iyisici ukwahlukahlukana. Material ngokuvumelana nala mazwi anengqondo umbiko
Ingcindezi indoda njengoba inkomba ayisihluthulelo isimo sezempilo
Biography Cosmonaut Grechko Grigoriya Mihaylovicha, indiza emkhathini, imiklomelo kanye izihloko
Nucleotide - Iyini? Ukwakheka, isakhiwo, inombolo kanye ukulandelana nucleotide esikuziphathimandla DNA
Umqondo ubuntu e kwabantu njengelungu abaqaphela umphakathi
Amigurumi enentshisekelo: u-hare
Imithi. Glycine imfundo manual
Yini odinga ukukwazi ngaphambi ukwakha imiphefumulo cottage ngezandla zabo?
Sandblasting Ikhamera: izinhlobo imishini esetshenziswa futhi Abrasives
Kangakanani ukusabela amandla omlilo